‘वन विकासको बाधक होइन, समृद्धिको आधार हो’ शक्तिबहादुर बस्नेत, वन तथा वातावरणमन्त्री
जनतापाटी शनिबार, पुस १२, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पूर्वाधार विकासमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय बाधक नभई समृद्धिको साधक भएको दावी गरेका छन् । उनले वन पैदावार समृद्धिका लागि सदुपयोग गर्नेगरी नीति बनाइएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा परिणाम प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री बस्नेतसँग गरिएको अन्तवार्ताको सम्पादित अंशः
–लामो समय नेपाली समाज सङ्क्रमणबाट गुज्रियो । धरै विषय व्यवस्थापन गर्नु थियो । त्यसमध्येमा पनि संविधान निर्माणपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नका निम्ति पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरु यो सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसकारण वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुरामात्र होइन सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनका निम्ति गर्नुपर्ने कानूनी, नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था तथा अन्य कैयन व्यावहारिक मूल्यलाई स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मूलभूत रुपमा यसले पूरा गरेको छ ।
सेवा प्रवाहको दृष्टिले अन्य मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने अन्य जिम्मेवारीको कोणबाट समीक्षा गर्छौं, मलाई लाग्छ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कति काम ग-यो भनेर अन्य सेवाग्राही, सरोकारवालासँग लिने प्रतिक्रिया अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । मन्त्रालयका तर्फबाट गरिएका समीक्षाका आधारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको इतिहासमा जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रबाट हेर्दा हामीले महत्वपूर्ण ‘सिफ्ट’ गरेका छौँ । चाहे नीतिगत र कानूनी व्यवस्था, संरचनागत, योजना निर्माण र कार्यान्वयन र सुशासनको दृष्टिले महत्वपूर्ण सुधार गरेका छौँ ।
– पहिलो विषय ‘हरियो वन, नेपालको धन’ जनताको धन भएको खासै अनुभूति भएको छैन । लामो समयसम्म धेरै मात्रामा काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । जुन निकै दुःखद् अवस्था हो । हाम्रा केही मान्यतामा भएको कमी, नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाका कारणले त्यस प्रकारको परिस्थिति सिर्जना भएको थियो ।
कार्यान्वयनमा देखिनुपर्ने तदारुकता र इमान्दारिताको प्रश्नमा पनि यसलाई खोज्नुपर्ने अवस्था थियो । एकातिर हामी हरियो वन नेपालको धन भन्ने, अर्कातिर हाम्रा नीति कानून, मूल्यमान्यता वन भनेको जैविक विविधता र वातावरणीय दृष्टिले सेवा क्षेत्र हो भन्ने मान्यता व्यावहारिक स्थापित थियो । अनि कसरी हरियो वन नेपालको धन बन्छ ? हामीले वनलाई कहिल्यै पनि आर्थिक क्षेत्र मानेनौँ ।
–यो मुलरुपमा गौरव गर्नुपर्ने विषय हो । दुर्लभ वन्यजन्तुका रुपमा एकसिङ्गे गैँडा, पाटेबाघ नेपालका सम्पदा हुन् । एकसिङ्गे गैँडा र बाघ हेर्न थुप्रै पर्यटन नेपाल आउने गरेका छन् । नेपाली हुनुको नाताले विश्वको दुर्लभ वन्यजन्तुमध्येको एकसिङ्गे गैँडा र पाटे बाघ नेपालमा छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भन्न पाउँदा गौरवको महसुस हुन्छ । तर यतिभन्दा भन्दै पनि हामीले दुईवटा कुरामा मुख्य उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । पहिलो सन् २०२२ सम्ममा बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको नजिक हामी पुगेका छौँ ।
दोब्बर बनाउने हाम्रो उद्देश्य पूरा हुँदैछ । जुन निकै ठूलो उपलब्धि हो । दोस्रो गैँडाको चोरीशिकारीलाई शून्यमा कायम राख्न सफल भएका छौँ । एक वर्ष होइन, लगातार केही वर्ष शून्य चोरीशिकारीको परिणाम हासिल गरेका छौँ । यसलाई पनि सगर्व हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राखेका छौँ । यो भनेको जैविक विविधिताको संरक्षणप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता र वन्यजन्तु संरक्षणको कुशलता हो ।
हाम्रा नीति कानूनका कारण विकासलाई प्रभावित बनाएका कुरालाई हामीले स्वीकार गरेको छौँ । हामीले विकास विरोधी कानूनलाई सुधार गरेका छौँ । सुधार के भनेर ग¥यौँ भने, पहिलो विकास आयोजना निर्माण गर्नुपर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । कहीँ सानो एउटा पानी ट्याङ्की निर्माण प¥यो भने कि इआए कि आइई गर्नुपथ्र्यो । अत्यन्त साना आयोजना निर्माणलाई सहज बनाउन ‘संक्षिप्त वातावरणीय मूल्याङ्कन’ गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । वन ऐन तथा वातावरण संरक्षण ऐनमा त्यो व्यवस्था गरेका छौँ ।
रारा, खप्तड, मकालु, कञ्चनजङ्गा, शुक्लाफाँटामा पर्यटक जानु पर्दैन, आज किन त्यहाँ पर्यटक पुग्न सकेका छैनन् । किन चितवन, सगरमाथा, अन्नपूर्ण र लाङटाङमा मात्र पर्यटक गइरहेका छन् । यसको जवाफ के त त्यहाँ न्यूनतम् पूर्वाधार छैनन् । बाँकी ठाउँमा न्यूनतम् पूर्वाधार छन् । हो अब न्यूनतम् पूर्वाधार ती ठाउँमा बनाएरपछि नयाँ गन्तव्य खुल्छन् नि त । पर्यटन प्रवद्र्धनमा यसले सघाउन पु¥याउँदैन, यो कुनै बेठीक कुरा भयो रु यसले संरक्षणमा कुनै चुनौती थप्छ ? चितवन, सगरमाथामा न्यूनतम पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउँदै गर्दा ठीक त्यही कुरा रारा, खप्तड, मकालुलगायतमा गर्दा बेठीक हुन्छ ?
–जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका विषय नेपालको प्रमुख एजेन्डा हो । वातावरणका केही आन्तरिक पक्ष पनि छन् । यस वर्ष हामीले उपत्यकालगायत प्रमुख सहरहरुमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि रणनीतिक कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढाएका छौँ । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट केही थप निर्णयको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।
प्रस्तुतीः राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का रमेश लम्साल, अशोक घिमिरे र हेमन्त केसी
बैंकमा पैसा राख्नेमा कुन जिल्लाका नागरिक अघि ? ८ मिनेट पहिले
भारतीय दूतावासभित्र सुरक्षाकर्मीले आफैँलाई गोली हानी गरे आत्महत्या १४ मिनेट पहिले
ट्रमा सेन्टरमा २४ घण्टा विशेषज्ञ सेवा २० मिनेट पहिले